Isa al Masih ku saabsan Tawreed | Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Tag Archives: Isa al Masih ku saabsan Tawreed
Posted on 03/06/2015 by Ragnar	Reply	Xataa haddii aan aqoonsanahay in Quraanka iyo Sunnaha labada xaqiijinayaan in Kitaabka ( Tawreed , Injiil iyo Zabur uu ka samaysan yahay al Kitab ) aan la bedelay ama kharribeen (sida aan halkan iyo halkan muujiyey ) waxaa weli ka tago furo su’aasha ah ee in ay Kitaabka Quduuska ah / al Kitab waxaa superseded , baabi’iyo ama bedelay Quraanka . Muxuu Quraanka laftiisa dhihi fikraddan ?
Waxaana kugu Soo Dejiyey Kitaabka Xaqa Isagoo Rumayn wixii ka Horeeyey oo Kitaab ah. Isagoo Marag iyo ILaaliye u ah, ee ku kala Xukun Dhexdooda wuxuu soo Dejiyey Eebe hana ka Raacin Hawadooda waxa kuu Yimid oo Xaq ah, Dhammaan waxaan u Yeellay Shareeco iyo Waddo hadduu Doono Eebana wuxuu idinka Yeeli Umad kaliya, Laakiin wuu idinku Imtixaami wuxuu idin Siiyey ee u Tartama Khayrka, Xagga Eebe yey Noqoshadiinu tahay Dhammaan wuxuuna idiinka Warrami waxaad isku Diidanaydeen… Suratul Al-Maa’iida 5:48.
Quraanka waxaa ka horreeyay kitaabkii (Nabi) Muuse, isagoo ah hanuuniye iyo naxariis, kanna waa kitaab u rumayn (xaqa). Af carabina ku soo dagay, si uu ugu digo kuwa dulmiga falay, uguna bishaareeyo kuwa wanaagga falay. Suratul Al- Ahqaaf 46:12
Kanna wan Kitaub aan soo Dejinay oo Barakaysan, oo Runiayn wixii ka Horreeyey iyo inaad ugu Digtid Maka ye Dhinaeyadeeda. kuwa Rumayn Aakhira waxay Rumeyn Quraanka salaaddana way ILaalin. Suratul Al- Ancaam 6:92
Kaan kuu waxyoonay ee Quraanka ah unbaa xaq ah wixii ka horreeyayna u rumayn Eebana addoomadiisa waa ogyahay, arkaana. Suratul fatir 35:31
Marinnada waxa aay ka hadlayaa oo aay ku saabsanyihiin inu Quraanka xaqiijinaayo ( nasaqay , gardarroodo ama bedelida ) fariinta hore ee Kitaabka Qudduuska ah ( al Kitab ) . Si kale haddii loo dhigo , ayaadahanu ma sheegayaan in Mu’miniintu aay ka foogadan barashada waxaygii hore oo aay baratan waxaygii ugu dambeyeey . Sidaa darteed Mu’miniinta waa inay barataan oo aay adeecan waxaygii hore sido kale.
Tan waxa aay sidoo kale xaqiijiyanasa ina aay ayadaha inayna jirtin ‘ kala soocnaaan’ ‘ u dhexeeya ama kala duwaansho waxyiga Ilaahay (Swt). . Halkan waxaa ku qoran laba ayadood oo aan ogaaday :
“Wuu rumeeyey Rasuulku wixii looga soo dajiyey Xaga Eebihiis, Mu’miniintuna (way rumeeyeen) dhamaana waxay rumeeyeen Eebe, Malaa’igtiisa kulubtiisa iyo Rasuuladiisa, mana kala geynayno mid ka mid ah Rasuuladiisa dhexdooda, waxayna dhaheen waan maqalay oon adeecnay, dhaafidaada. Eebahanow xaggaagaana loo ahaan.” ( Suratul Al-Baqarah 2:285)
waxaad dhahdaan “ waxaan rumaynay Eebe iyo waxa naloo soo dajiyey iyo waxa lagu soo dajiyay Ibraahim, Ismaeiil, Isxaaq, Yacquub. iyo Caruurtoodii iyo wixii la siiyay (Nabi) Muuse iyo (Nabi) Ciise iyo wixi laga siiyey Nabiyadii (Kale) xagga Eebohood kala gaynamayno dhexdooda, waxaan u hogaansamaynaa Eebe.” Suratul AL- Baqarah 2:136
Ayaada koowaad waxa aay ino sheegaysa inaan waxa kala soocnaan ah u dhaxayniin ama kala duwanasho Rasuulladdii- oo waxa weeye in dhamaantood la dhagaysto ama la maqlo ta labaad waxa jira inaan wax farqiya u dhaxyniin waxyigii lagu so kala dejiyeey Nabiyadii ( Cs) Ilaahay (swt)- waan in dhamaantood la aqbalo. Dhamaan ayadaha sare ku xusan midna ma soo jeedinayso in ayadahii hore in la halmaamo ama aan la akhrisan waayo maxa yeelay waxyigii danbe ayaa nasaqay.
Arinkan aan hore u soo xusnay waxa uu tusaale u yahay wax baridii Isa al- Masiix (NNKH). Isaga laftiisa muu odhaniin waxygii hore ee tawreed iyo Sabuur waa la nasaqay markii waxyiga lagu soo dejiyeey. Runtii isagu waxa uu baray arin arinka ka duwan oo ka so horjeeda. Hoose ka akhri sida uu u xushmayn jiray Tawreed ee sida joogtada uu uga hadli jiray waxbarsitii Nabi Muuse(Cs).
17 Ha u malaynina inaan u imid inaan sharciga ama qorniintii nebiyada baabbi’iyo; uma aan iman inaan baabbi’iyo, laakiin waxaan u imid inaan wada oofiyo 18 Runtii waxaan idinku leeyahay, Intaan cirka iyo dhulku idlaan, xaraf ama dhibic keliya ka idlaan mayso sharciga ilaa ay wada noqdaan. 19 Sidaa darteed kii jebiya qaynuunnadan kuwa ugu yar midkood, oo sidaas dadka u bara, waxaa loogu yeedhi doonaa kan uga yar boqortooyadii jannada, laakiin kii yeela oo bara, waxaa loogu yeedhi doonaa kan weyn boqortooyadii jannada. 20 Waayo, waxaan idinku leeyahay, Xaqnimadiinnu haddaanay ka badnaan tan culimmada iyo Farrisiinta, geliba maysaan boqortooyadii jannada. (Matayos 5:17-20)
Runti, si aaynu wax uga fahano wax baridiisi waxa uu ino sheegay in marka hore aaynu ku bilowno Tawreed kadibna aan barano Sabuur. Sida soo socota ayuu Ciise wax u bari jiray xertiisi:
Markaasuu ka bilaabay Muuse iyo nebiyada oo dhan, Qorniinka oo dhanna ayuu uga micneeyey wixii isaga qudhiisa ku saabsanaa. ( Luukos 24:27)
Wuxuu ku yidhi, Kuwani waa hadalladaydii aan idinkula hadlay intii aan weli idinla jiray. Waa inay noqdaan wax walba oo sharciga Muuse ( tusaale ahan Tawreed) iyo nebiyadii iyo sabuurrada laygaga qoray ( tusaale ahan Sabuur). ( Luukos 24:44).
Isa al Masiix (NNKH) iskumu dayin inu iska ilaaliyo waxyigii isaga ka horeyaay. Runti waxa uu baristiisa iyo toosintiisa uu ka bilaabi jiray waxyiga hore. Marka aniguna waxa aan raacaya tusaalihiisi oo waxa aan ku bilaabay barida Tawreed si aan asaaska lagu fahmo ee Injiil.
Posted in Lagu kalsoon yahay oo aan la bedeli karin	| Tagged Isa al Masih ku saabsan Tawreed, Kitaabka Sabuur ku saabsan, Kitaabka Tawreed ku saabsan, ku saabsan al Kitab, Maxuu Ciise ka leeyahay Sabuurka, Maxuu Ciise ka leeyahay Tawreeda, Maxuu Quraanka ka leeyahay Kitaabka Quduuska ah, oo ku saabsan Tawreed, oo ku saabsan Zabor, Quraanka iyo Kitaabka Quduuska ah, Quraanka ku saabsan al Kitab, Quraanka ku saabsan Kitaabka Quduuska ah, waxa aanu Isa al Masih yidhaahdo oo ku saabsan Zabor, waxa aanu Quraanka yidhaahdo oo ku saabsan al Kitab, waxa aanu Quraanka yidhaahdo oo ku saabsan Kitaabka Quduuska ah, waxa sameeya Isa al Masih yidhaahdo oo ku saabsan Tawreed	| Leave a reply